kemitism ၏အခြေခံအုတ်မြစ် - AFRIKHEPRI
အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သောဖြစ်ရပ်များက Ausar အားပြန်လည်မွေးဖွားစေပြီး Amenti (Beyond) ၏တံခါးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်နတ်ဆိုးများအားဖြင့်ငါတို့လူမျိုးကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းသည်ဘုရား၏အကြံအစည်နှင့်အပြည့်အဝညီသည်။ သူသည်သူ၏တည်ရှိမှုကိုသံသယမ ၀ င်နိုင်သည့်သူ၏ဖန်တီးမှု၊ အကြီးမြတ်ဆုံးစီစဉ်သူ (ဘုရားသခင်) သည်အမှန်တကယ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာ၌မဆိုစိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်း၊ အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခြင်း၊ အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခြင်း၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ ရာစုနှစ်များစွာချီ။ ငါတို့လူမျိုး၏ဝိညာဉ်ရေးရာပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ ငါတို့ဂျူးတွေ (ဖလာချစ) လား၊ ခရစ်ယာန်လား၊ မွတ်စလင်လား၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် "ထင်ရှားသော" ဘာသာတရားများအားလုံးတွင်အာတွန်ယိုယွင်းမှုကို (ပြန်လည်) တွေ့ရှိရပါသည်။
Adama-Awa (Adam-Eve) ၏ဇနီးမောင်နှံထက်ပိုပြီး၎င်းသည်အီဘရာဟင် / အာဗြဟံ၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး“ ထင်ရှားလာသည်” ဟုသိကြသောဘာသာတရားများတွင်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ အီဘရာဟင် / အာဗြဟံမှလူများသည်မတရားသောသူဖြစ်ကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကုရ်အာန်ကသက်သေပြပြီးပြီဖြစ်သည်။ အီဘရာဟင်သည်မယုံကြည်သောခါလဒဲမှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မေကကီဒက် (သူမဟာမိတ်ပြုထားသူနှင့်အတူ) အမှန်တရား၏ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံသို့စတင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်၎င်းသည်ကီမီနယ်မြေ၊ ပိုမိုတိကျစွာကန်နိုနူး (ခါနာန်၊ လက်ရှိပါလက်စတိုင်း၊ Ausar ယဉ်ကျေးသောပြည်) ၌သာဖြစ်သည်။ 'သူ (အီဘရာဟင်၊ အာဗြဟံ) သည်ဘုရားသခင်နှင့်အမှန်အတိုင်းမေ့လို့မရဘဲဘုရားသခင်ကိုလက်အောက်ခံပြီးဘိုးဘေးများ၏ကိုးကွယ်မှုကိုချက်ချင်းစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် Atonian ဖွင့်ဟချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကီမီပြည်၌သူအမည်ကိုယူခဲ့သည်ခလရ-Ra-Imဤသည်ဘုရားသခင့သူ၏စိတ်နှလုံး၌တည်ရှိ၏Médou NETER (faraonique ဘာသာစကား) မှာ, ကိုဆိုလိုသည်။
သမ္မာကျမ်းစာကသူ့ကိုအရေးကြီးဆုံးဘိုးဘေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေပြီး၊ ကုရ်အာန်သည်ဘုရားသခင်အားလက်အောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
မောရှေ၊ သခင်ယေရှု၏သတင်းစကားကိုယုံကြည်သူမည်သူမဆို Atonian ယုံကြည်ခြင်း Ib-Ra-Im ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်ယုံကြည်သည်။ “ ထင်ရှားသော” ဘာသာတရားများမှပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားသက်သေခံကြပြီးသူသည် Atona ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်သူ၏ရွယ်တူချင်းများ၏ရုပ်ပုံကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်ရွံရှာဖွယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းသက်သေခံခဲ့သည်။
သူကမျြးစာကိုခေါ်ဆိုသော Kemite, လက်ထပ် Agar / Adjara, Aa-ka-Ra ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော medou neter တွင်“ ဘုရားသခင်၏က ka သည်ကြီးမြတ်သော၊ ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းစွမ်းအားသည်ကြီးမြတ်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ Elle lui donna un fils: Ismael (ဘုရားသခငျကိုအမှနျတကယျပဲဖြစ်တယ်, ဆိုလိုတာက Maa အဘိဓါန် El Is) ။ သူ (အစ်စမမ်) သည်ကီမီမြို့သားတစ် ဦး နှင့်လည်းလက်ထပ်ခဲ့ကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြသည် (ကမ္ဘာ ဦး ၂၁၊ ၂၁) ။ Kemite မိခင်၊ ကေမီအမျိုးသမီး၊ ကေမီကလေးများ၊ Ismael သည်ကုရ်အာန်အစဉ်အလာအရအာရေဗျသဲကန္တာရ (ယနေ့အာရေဗျ) တွင်နေထိုင်သူတို့၏ဘိုးဘေးနှင့်သူ၏ဖခင်နှင့်အတူမြင့်မြတ်သောအိမ်၏စာရေးသူဖြစ်သည်။ 'မက္ကာတွင်တွေ့ရသောအာရပ်: ကဟာဘား (ကာဘသည်မွန်တူနက်တွင်ဝိညာဉ်နှင့် ၀ ိညာဉ်ကိုသွတ်သွင်းနိုင်သောမြင့်မြတ်သောစွမ်းအင်များ) ။
မူဆာ၊ မဆူး (ဘုရားသခင်မွေးဖွားတော်မူသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောမဆွာအာတနာအတို) သည်သမ္မာကျမ်းစာကိုယ်နှိုက်အရအစပြုကာမီနီအမျိုးသမီး (နံပါတ် ၁၂၊ ၁) နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သောကီမီ (ထွက်မြောက်ရာ ၂၊ ၁၉)၊ ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပညာတတ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း၊ ကေမီ (တမန်တော် ၇း၂၂) ။ သူကပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏သိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ medou neter (မောရှေ၏ဘာသာစကား) တွင်ပညတ်တော်ကို“ oudja” ဟုခေါ်သည်။ ရှေ oudja အမိန့်များနှင့်မိန့်ခွန်းနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်oudja မောရှေ၏အောက်ပါအချက်များကိုနေသော Atonian အယူဝါဒ၏ဆယ်ပါးသောစကားများထက်အခြားအချည်းနှီးဖြစ်၏ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု Ankh Pa Neter နန်ဝ ky Hury Tep EF။ အဘယ်အရာကို "အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်Atona-Ankh၊ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်း၊ အဘယ်သူမျှမကသူ့အထက်တွင်မရှိပါ"။ ဤအယူဝါဒကိုလက်ခံခြင်းသည်ရွှေနွားရုပ်၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သောမိမိလူမျိုးတော်၏အလွန်အမင်းရုပ်ပုံကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့်အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုအပြစ်ပေးရန်မောရှေအားတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ အဲဒါ ၁၀ ခုရဲ့နာမပါ oudja qu’il condamna cette partie viciée, corrompue, impie, mécréante de son peuple. Et se sont ces 10 oudja ကုရ်အာန်က“ ကိုးကွယ်ရာအရှင်တစ်ပါးတည်းမရှိ၊ ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိဘဲဘုရားသခင်မှတစ်ပါးဘုရားသခင်မရှိ” ဟုဆိုသည့်အခါယုံကြည်ခြင်း၏အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည်အာတွန်၏ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုမလွှဲမရှောင်ရည်ညွှန်းကြောင်း၊
မည်သူမဆိုမိုဟာမက်၏ဖွင့်ဟချက်ကိုယုံကြည်သောသူမည်သူမဆိုသခင်ယေရှုကို၎င်း၊ မောရှေ၏ယုံကြည်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အီဘရာဟင်၏ယုံကြည်ခြင်း၊
သခင်ယေရှု၏စရိုက်လက္ခဏာက“ ခရစ်” ဟုခေါ်သည်။ ဂရိ“ ခရစ်စတို” မှဆင်းသက်လာသည်။ (ဘိသိက်ခံ၊ ရွေးချယ်ထားသော [ဘုရား]]၊ မေရှိယ) မှ Ausar ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် Ausar သည်ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးသော Shabazz အနွယ်မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည် Setep En Atona (ဆိုလိုသည်မှာ“ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသူ”) ကိုဆိုလိုသည်။ (မေရှိယ) ကို Isha, Medou Nefer ၏ကြေငြာသူဟုလည်းခေါ်သည်။ ယခု“ Isha” သည်ကြိယာမှဆင်းသက်လာသောပုံမှန်အားဖြင့်ကီမီကျွန်း၏ပထမအမည်ဖြစ်သည် ish သတိပေးလျက်ကြေညာအဓိပ္ပာယ်; နှင့် medou nefer သည်“ သတင်းကောင်း” (ဂရိ angel ၀ ံဂေလိတွင်).
ထပ်တူထပ်မျှမဟုတ်ဘဲ Isha / Issa / Jesus ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာသည် Ausar ၏သရုပ်သကန်ဖြစ်သည်။
Isha / Issa / Jesus ရဲ့“ medou nefer” (သတင်းကောင်း၊ g ၀ ံဂေလိတရား) ကိုယုံကြည်သူက Ausar ကိုသာယုံကြည်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Issa = Ausar ။
အီဘရာဟင်၊ အာဗြဟံ၊ မောရှေ / မူဆာ၊ Issa / Jesus နှင့်အခြား Ismael မှလွဲ၍ Idriss (အခန်းငယ် ၅၆ မှ ၅၇) နှင့် Loqu'man (Sura 19) တို့ကိုကိုးကားနိုင်သည်။
Idriss ကိုDjéhouty (Thot) လို့ခေါ်ပြီးဂရိ - လက်တင်ရှေးဟောင်းဂရိလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသောDjéhoutyသည်ဘုရားသခင်အားစာရေးခြင်း၊ သိပ္ပံ၊ သင်္ချာ၊ နောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်ကာလအတွင်း Ausar ခုံရုံးတွင် Maat နှစ်ခု၏ခန်းမ၌သေလွန်သူ၏အပြစ်နှင့်ကောင်းမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသူ။ ကုရ်အာန်သည်အီဒရစ်ဟုခေါ်ဆိုသောဤကီမီသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောကေမီတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်တိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောကြောင့်ရိုသေလေးစားမှု၊
ဂရိ - လက်တင်ကမ္ဘာ Aesop ၏အမည်ဖြင့်ပိုမိုသိရှိထားသည့် Loqu'man သည်ဒီကေတီလူမျိုးဖြစ်ပြီး La Fontaine သည်ပြင်သစ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသောဒဏ္ablesာရီများဖြစ်သည်။ သူ၏ကြီးမားလှသောဉာဏ်ပညာနှင့်ဘုရားသခင်ကိုမဆုတ်မနစ်ချစ်ခြင်းကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်၏ဗျာဒိတ်တော်အား Atona ကိုလုံးဝလက်အောက်ခံခြင်းမှအမှန်တရားကိုမွတ်စ်လင်မ်တို့အားလမ်းပြရန် Sura (သူ၏အမည်ဖြင့်ခေါ်သည့် Sura 31) တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Aesop (Loqu'man) နှင့်Djéhouty (Idriss) နှစ် ဦး စလုံးသည် Atona လက်အောက်ခံခဲ့ကြသည်။ နှစ် ဦး စလုံး Ausar ကကမ္ဘာတစ်ခွင်မှသင်ကြားပေးသောအမှန်တရားဘာသာကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပရောဖက်မိုဟာမက်သက်သေခံသည့်အမှန်တရား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား (Atona) ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကုရ်အာန်ကို al-Dikhr ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ အယူခံဝင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ခေါ်ဆိုမှုမရှိပါ။ သို့သော်ဤအသနားခံစာကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိပထမ ဦး ဆုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမများဖြစ်သောခိမစ်လူမျိုးများထံစတင်တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အတည်ပြု သန့်ရှင်းသောကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အခန်းငယ် ၂၆ နှင့် ၂၈ တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည်မှာ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကြယ်သောရွှံ့ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်တူသောလူသား၏ရွှံ့မြေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီ။ (…) ထိုအခါသင်၏သခင်သည်ကောင်းကင်တမန်များအားပြောကြားသောအခါကျွန်ုပ်သည်အထူးသဖြင့်ရွှံ့ရွှံ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှံ့စေးသဏ္ဌာန်ကိုပြုလုပ်မည်။
သူ၏ Imperial High HailiéSélassiéသည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ Marcus Garvey ထက်ပိုလွန်သည်။ Rastafarianism ၏ Holy Piby သည် Kemet ကိုrefersကရာဇ် Haile Selassie ၏ဇာတ်ကောင်မှတစ်ဆင့်ရည်ညွှန်းသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူသည် Sheba ဘုရင်မမှဆင်းသက်လာသော်လည်းရှေးခေတ်ဘုရင် Ori ထက် ပို၍ ပင်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အီသီယိုးပီးယား (Ta Neter, လက်ရှိအီသီယိုးပီးယားနှင့်ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ်) ။ Negus Hailie Selassie ကဆင်းသက်လာသည်ဟုပြောဆိုသော Ori ဘုရင်သည် Ausar မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး မျှမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အီသီယိုးပီးယားမှသင်၏ Neter ဘုရင် Shabazz ၏နှာမှူးဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု SETEP အတွက်. ၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာ၊ သမိုင်းအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်စေ Negus HailiéSélassiéသည်တရားဝင်မှုရှိရမည်။ ထို့ကြောင့် Ausar သည် Rastafarianism သည်၎င်း၏ဘာသာရေး၊ ၎င်း၏သင်ကြားမှု၊ ဂုဏ်ကျက်သရေနှင့်၎င်း၏အနှစ်သာရအားလုံးကိုကြွေးတင်နေသည်။
မှကောင်းသောစာသားကို Fari_taharka !